Ike na nsogbu ya na gburugburu ebe obibi | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike ọkụ na ihe ọ na-akpata dị ka isi iyi ike
Adrian | | Emelitere na 14/07/2017 12:03 | Ike ike
Icheku ọkụ abụwo isi iyi ruo ọtụtụ iri afọ maka ọgbọ nke ọkụ eletrik ma ya mere bụ isi ihe kpatara mmetọ ikuku gburugburu ebe obibi na mgbanwe ihu igwe.
Ma,otú ike coal si emetụta gburugburu ebe obibi gịnịkwa ka ọ na-ewetara anyị niile? Ka anyị hụ ya.
1 Mmetụta gburugburu ebe obibi nke ike coal
2 Adịghị ike ike
3 Ọdịnihu nke ike ọkụ
Mmetụta gburugburu ebe obibi nke ike coal
Osisi ọkụ eletrik nke ala ya bu kol na-eme oku, ha na-emetọ carbon dioxide na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ kwa afọ.
Naanị na United States enwere ụlọ ọrụ ọkụ na-ere ọkụ 600 na ụwa enwere ọtụtụ puku osisi na-eji kol dị ka isi iyi ike, nke na-akọwa mmebi gburugburu ebe obibi na ịdị mma nke ndụ nke ọtụtụ akụkụ nke ndị bi gburugburu ụwa.
Ọ bụ mmetọ kachasị emetụ mmanụ ọ bụghị naanị n'ihi ọtụtụ carbon dioxide kamakwa n'ihi ihe ndị ọzọ na-egbu egbu dị ukwuu dị ka Mercury, soot n'etiti ndị ọzọ a na-agbanye n'ime ikuku. Umu anwuru ndi a na - ebute ihe di egwu na ahu ike nke onu ogugu ndi mmadu no na gburugburu osisi ndia.
Adịghị ike ike
Otu adịghị ike kol na -emepụta ọkụ eletrik bụ obere ọrụ ike ya ebe ọ bụ na a gbakọọ ya naanị a na-eji ihe kachasị 35% nke mkpokọta ọkụ ejiri ya.
Ma gịnị kpatara eji eji ya eme ihe n'agbanyeghị ụdị adịghị mma dị otú ahụ? Azịza ya dị mfe, ọ bara ụba ebe enwere nchekwa ma ọ dị ọnụ ala karịa iji wepụ ma hazie ya karịa ihe ndị ọzọ dị ọcha na nke nwere mmeghari ohuru, na mgbakwunye, a ka na-eji osisi ochie eme ihe n'emeghị ego ọ bụla.
Ná mba ụfọdụ, a na-akwado ọrụ a, nke na-egbochi ime ka ọ gbanwee ume ọhụrụ dị ka Ike isi mmalite.
Ọdịnihu nke ike ọkụ
Stopkwụsị mgbanwe ihu igwe na mmebi gburugburu ebe obibi O di nkpa ka a kwusi igu ulo na-etinyere ya n’oku ozo jiri ike ozo were dochie anya ebe ihe ndi ozo n’adighi nma.
Ike Kol bụ isi mpu n'akụkụ mmanụ combus nke mmetọ gburugburu ebe obibi ụwa na onye kpatara mmebi ahaghị ụwa nke a na-amalite ịhụ ihe ọ rụpụtara.
Plantlọ ọrụ mmanụ ọ bụla mepere emepe ma ọ bụ kilo nke kol a na-egwupụta bụ akụkọ ọjọọ nye ndị na-eche maka gburugburu ebe obibi. N’ezie ọdịnihu gafere kwụsị iji kol na ụbọchị nke ụbọchị anyị na nzọ, ọtụtụ na ndị ọzọ, na ume ndị nwere ume ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Ike ọkụ na ihe ọ na-akpata dị ka isi iyi ike
Ike niile nwere nsonaazụ na icheku ọkụ ga-abụ otu n'ime ole na ole esi achọta ihe ngwọta iji melite arụmọrụ oge niile yana mmetụta ọ nwere na gburugburu ebe obibi.
Ha nwere ike muta umu osisi na mmiri ha n’aru ikuku
Ikike niile nwere ihe na-esi na ya pụta na coal ga-abụ otu n'ime ihe ndị na-emetụta mmetụta gburugburu ebe obibi kachasị. Ekwesiri igbanye ume na obere uzo ma kesaa ya: mini-hydro, mini-wind, solar solar in home, etc. kwụsịkwa ịrụ nnukwu ogige ntụrụndụ ọgbọ.
Gịnị ga-esi na ya ga-anọgide na-eji mmanụ na kol dị ka isi iyi nke oge gboo ike
Zaghachi camila andrea gabilan muñoz
eri m poronga petite shit der blog nwere mmasị na ụmụ agbọghọ zaa m jikoro 5 mita
Zaghachi na poteo
Agbaghara m canine Gatpooooo
Nsogbu gburugburu ebe obibi maka 2017
Obodo nke oge a